Ejipta: Synagoga potika…Synanjavona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2009 8:08 GMT
Tamin'ny taona 2008 dia tojo trano fivavahana jiosy iray i Moftasa, synagoga zary lasa foiben-toeran'ny Antoko Demokraty (National Democratic Party) mitondra any Ejipta amin'izao fotoana. Ny tena mahavariana dia hoe ireto Ejiptiana namotika ny synagoga Magen Abraham ireto ihany no Ejiptiana tezitra tamin'ny fanapahan-kevitry Suisse tsy namela azy ireo hanangana minaret amina mosquée tany an-toerana.
Toy izao no fiandohan'ny fitantaran'i Moftasa [misy sary ao]:
Ny volana aprily 2008 tany Hadayeq el Qobba no tojo ity synagoga ity aho izay nanjary biraom-panjakana,foiben-toeran'ny antoko NDP, toeram-pitsaboana ary mosquée kely.
Voarara tanteraka ny naka sary. Kanefa afaka naka sary ihany aho satria nilaza hoe mpianatra momba ny taon-trano ary liana amin'ny endrik'ilay trano.
Notohizany ny famaritany ny toetry ny synagoga:
Ratsy be ny gorodona, miparitaka eny rehetra eny ny tariby mitondra herinaratra, ratsy dia ratsy ny fahazavan'ny jiro, miraikitra amin'ny harafesenina ny tariby madinika, varavarankely vita amin'ny carreaux nosoloina baoritra ary ny toerana masina rehetra, izay notarafin'ny varavarankely ka manjelatra noho ny taratry ny kintan'i Davida dia nosoloina Mogama3 matroka.
Sarah Carr mampiseho ny sarin'ny synagoga ary nankafizin'i Max Strasser ny fomba nampisehoany ny synagoga ho lasa synanjavona!
“Synanjavona” tena hevitra mahafinaritra indrindra. voambolana tsara indrindra amin'ny volana.
Endritsoratra sa sarinteny amim-patsany tsara ilay hoe “synanjavona”?
Sarin'ny Synanjavona ao Le Caire avy amin'i @TravellerW
Lasa tranom-panjakana ny Synagogan'i Le Caire
Lina Attalah syMohamed El Dahshan [ ato ny sary]avy ao amin'ny gazety Al-Masry Al-Youm no manohy ny zavatra nosoratan'i Moftasa mikasika ny synagoga Magen Abraham ary nanoratra toy izao
“Naorin'ny fianakaviana Adda io fiangonana io”, hoy Carmen Weinstein, filohan'ny Fikambanan'ny Jiosy any Ejipta (JCC).
“Fianakaviana Jiosy Ejiptiana, mpandraharaha sy mpiasan'ny banky ny fianakaviana Adda, fianakaviana nandray anjara betsaka tamin'ny fampiakarana ny toekarena ejiptiana tamin'ny taona 1940. Iriko raha hajain'ny fanjakana io fiangonana io, izay tokana ao amin'ny faritra misy azy”. Ho an'ny Jiosy tonga tany Ejipta talohan'ny taona 1952 dia fomban'izy ireo ny manorina synagoga manodidina izay misy azy ireo. Eo amin'ny manodidina azy dia manangana synagoga ny fianakaviana Jisoy” hoy Weinstein, izay milaza koa fa 13 amin'ireo synagoga 29 sisa no mijoro ao Le Caire.
Raha nanontaniana vaovao fanampiny mikasika ny trano ny Cairo Governorate dia nilaza ny tsy fahafahan'ity sampan-draharaha ity miasa.
Araka ny voalazan'ny mpiasa iray tsy nitonona anarana ao amin'ity sampan-draharaha ity ihany dia fantatra ao ami'nny distrika ny fisian'ity trano ity kanefa tsy nisy ny fahazoan-dalana na taratasy milaza izay tompony.
“Midika izany fa tsy nisy azo natao taminy, tsy noravana ary tsy nanmboarina ity trano ity. Na izany aza dia mino ny foiben'ny distrika any Hadayeq el Qubba fa tsara sy azo antoka ny fotony”, hoy izy. “Raha vao hoe tsy misy taratasy hahalalana izay tompony ny synagoga dia lasa fananan'ny fanjakana.”